Tenga rocuronium bromide powder (119302-91-9) HPLC≥98% | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Rocuronium Bromide upfu
Rating: SKU: 119302-91-9. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unogadzira kugona kubva ku gramu kusvika kuhuwandu hweRocuronium Bromide powder (119302-91-9), pasi peCGMP mutemo uye neinoteedzera mhando yekudzora mhando.
AASraw inopa kuchena kunze kwe99% Rocuronium bromide powder(CAS 119302-91-9) inoshandiswa kuvaki vemuviri kana marabhorari epasi pe… Isu tiri Rocuronium bromide poda vanopa, Rocuronium bromide poda iri kutengeswa, ..
Kuchena: ≥99% (HPLC)
Molecular Kurema: 609.68
Alpha: D20 + 18.7 ° (c = 1.03 muCCl3)
Solubility DMSO: Yakasanganiswa mumvura, ethanol, DMSO, chloroform, methanol.
Color: Muchena kusvika pahuvha mutsvuku
Zvimwe Zvinyorwa Pamusoro peRocuronium Bromide Powder Kubatsira Iwe Kuziva
Chii chinoshandiswa neRocuronium Bromide Powder
Rocuronium Bromide Powder yakachena kune imwe-yakachena pfumbu sechidimbu kune general anesthesia kuti iite zvose zvinokurumidza kutevedzana uye zvinowanzoitika mumatare intubation, uye kupa skeletal muscle relaxation panguva yekuvhiyiwa kana kushandiswa kwemhepo. Mero yeRocuronium Bromide Powder inofanira kuenzaniswa mumwe nomumwe mwoyo murefu. Nzira yeanesthesia uye nguva inotarisirwa yokuvhiya, nzira ye sedation uye nguva inotarisirwa ye mechanical ventilation, kubatana kunobvira nemimwe mishonga yemishonga inoshandiswa zvakagadziriswa, uye mamiriro omurwere anofanirwa kuongororwa paanosarudza chiremba Kushandiswa kwekodzero yakakodzera yekuongorora neuromuscular inokurudzirwa kuti kuongororwa kweeuromuscular block nekudzoka.Inhalational anesthetics inogona kuti neuromuscular inogadzirisa migumisiro yeRocuronium Bromide Powder. Izvi zvinogona kunge zvakadaro, zvinoita kuti zvive zvakakosha mune imwe nguva yeanesthesia, dzave dzakasvika kuhutano hunodiwa hunobatanidzwa mukubatana uku. Somugumisiro, kugadziriswa neRocuronium Bromide Powder kunofanira kuitwa kuburikidza nekuisa zviduku zvishoma zvekuchengetedza zvishoma pazvishoma zvishoma kana kushandiswa kwemazinga ekudzivirira kweRocuronium Bromide Powder munguva yakareba kwenguva refu (nguva yakareba kupfuura ye1 hora) pasi pemazuva ano anesthesia (ona chikamu 4.5). Muchirwere chevanhu vakuru mazano anotevera maitiro anogona kushanda semutungamiri mukuru wekutengesa mutsara uye kusuruvara kwemafupa kwenguva pfupi kusvika kwenguva refu yekuvhiya uye kushandiswa muimba huru yekuchengetedza.
Iwe unotora sei Rocuronium Bromide Powder
Mukuru: Pakutanga, 0.45 kusvika 0.6 mg / kg IV. Yepamusoro doses ye1 mg / kg inogona kushandiswa kune intubation panguva yekukurumidza kuteedzana induction yeanesthesia. Kugadziriswa: 150 mcg / kg ne inj (inogona kudzikira kusvika pa75-100 mcg / kg kana inhalational anesthesia inoshandiswa) kana nekumisikidzwa pachiyero che 300-600 mcg / kg / hr uye pasi peinhalational anesthesia iyo infusion mwero inotangira kubva pa0.3- 0.4 mg / kg / h. Kuenderera mberi kwekutarisa kweiyo neuromuscular block kwakakosha nekuti infusion chiyero chinodikanwa chinosiyana kubva pamurwere kusvika kune murwere uye neiyo nzira yeanesthetic inoshandiswa.
Mwana: Vacheche nevana> 1 mth: Pakutanga, 600 mcg / kg na inj. Kugadziriswa: 150 mcg / kg ne inj kana nekumisirwa pachiyero che 300-600 mcg / kg / hr, yekuchengetedza doses inogona kudikanwa kazhinji kazhinji kupfuura kune vakuru varwere. Iko hakuna kukwana data rekutsigira madosi ezvekushandisa kweRocuronium Bromide Powder mumacheche achangozvarwa (0-1 mwedzi) .Ichiitiko neRocuronium Bromide Powder mukukurumidza kuteedzana induction muvarwere vevana ishoma. Rocuronium Bromide Powder saka haina kukurudzirwa kuti igadzirise tracheal intubation mamiriro panguva yekukurumidza kuteedzana induction mune yevarwere varwere.
Kuberekwa: Muvarwere vanopinda muchikamu cheKesariya, zvinokurudzirwa kushandisa chete chirwere che 0.6 mg Rocuronium Bromide Powder ne kg kgwemu hwehutano, sezvo 1.0 mg / kg chirwere chisina kuongororwa muchikwata chevarwere.
Vakwegura: Kuderedza kuderedza maitiro: 75-100 mcg / kg, uye kukurudzirwa kunokonzerwa nekuderedzwa kuri 0.3-0.4 mg / kg / h (onawo Kuramba kuwedzerwa).
Renal impairment: Pakutanga, 600 mcg / kg ne inj. Maintenance: 75-100 mcg / kg, uye kukurudzirwa kwekukanganiswa kwechirwere ichi ndicho 0.3-0.4 mg / kg / h (onawo Kuenderera mberi kwekukanganiswa).
Hematic impairment: kana chirwere chebhiriyari: Pakutanga, 600 mcg / kg ner inj. Maintenance: 75-100 mcg / kg, uye kukurudzirwa kwekukanganiswa kwechirwere ichi ndicho 0.3-0.4 mg / kg / h (onawo Kuenderera mberi kwekukanganiswa).
Kuwandisa uye zvakanyanya: Kana zvichishandiswa muhuwandu hwehuwandu hwehutano hwakanyanya (hunotsanangurwa sevarwere vane uremu hwemuviri we30% kana kupfuura pamusoro pehutano hwemaviri) hunofanira kuderedzwa uchifunga nezvehutano hwakanaka hwemuviri.
Rocuronium Bromide Powder inofanira kugoverwa chete nevashandi vane ruzivo vanoziva kushandiswa kweeuromuscular blocking agents. Zvivako zvakakwana uye vashandi vekugadziriswa kwemazuva ekupedzisira uye mhepo inofanirwa kuputika inofanirwa kuwanika kushandiswa pakarepo.
Sezvo Rocuronium Bromide Powder inokonzera kuparara kwemapfupa ekufema, kubatsiridza ventilato kunomiririra kuvarwere vanobatwa nemushonga uyu wemishonga kusvikira kuputika kwakakwana kwepemhepo kuchidzorerwa. Sezvo neoromuscular block block agents, Zvakakosha kutarisira matambudziko ekutuka, kunyanya kana anoshandiswa sechikamu chekugadzirisa kwekugadzirisa maitiro.
Sezvimwe neorumuscular blocking agents, residual neuromuscular blockade yakashushwa neRocuronium Bromide Powder. Kuti udzivirire zvinetso zvinokonzerwa nekugarara kwehutachiona hwehutachiona, zvinokurudzirwa kuwedzera kunze kwekunge murwere atora zvakakwana kubva muururusiki. Zvimwe zvikonzero zvinogona kukonzera kusara kweeuromuscular blockade mushure mekunge kuwedzererwa mushure mekushanda-shanduko (zvakadai sekubatana kwezvinodhaka kana chirwere chevarwere) kunofanirawo kufungwa. Kana isingashandiswi sechikamu chechirongwa chekuchirapa, kushandiswa kwemugadziri (zvakadai se-sugammadex kana acetylcholinesterase inhibitors) kunofanira kufungwa, kunyanya mune izvo zviitiko zvinosara kuvhara neuromuscular inowanikwa.
Kuchinja kweAnaphylactic kunogona kuitika shure kwekushandiswa kweeuromuscular blocking agents. Kuchengetedza kwekuita maitiro akadaro kunofanira kutorwa nguva dzose. Kunyanya munyaya yekufananidzira kwevana anaphylactic kune neuromuscular blocking agents, zvinodzivirira zvakananga zvinofanira kutorwa sezvo chirwere chetachiona-reactivity kusvika kune-neuromuscular blocking agents chave chakataurwa.
Rocuronium Bromide Powder inogona kuwedzera kushaya kwemwoyo.
Muzhinji, kutevera kwenguva yakareba kushandiswa kweeuromuscular blocking agents muI ICU, kupera simba kwemazuva mazhinji uye / kana maronda ekuremara kwemaviri zvakataurwa. Kuti zvibatsire kudzivisa kuwedzerwa kwekuwedzera kwe-neuromuscular block uye / kana kudarika kunonyatsokurudzirwa kuti kutapurika kwe-neuromuscular kunoongororwa pose pakushandiswa kweeuromuscular blocking agents. Mukuwedzera, varwere vanofanira kuwana mazamu akakwana uye sedation. Uyezve, neuromuscular blocking agents inofanira kutumirwa kuti iite kune mumwe munhu varwere kana pasi pekuongororwa kwevanachiremba vane ruzivo vanoziva nezvezviito zvavo uye nehutano hwakakodzera hwekuongorora neuromuscular.
Myopathy mushure mekutonga kwenguva refu kwevamwe vasiri-depolarising neuromuscular blocking agents mu ICU pamwe ne corticosteroid therapy yave ichinyorwa nguva dzose. Nokudaro, kune varwere vanowanikwa neuromuscular blocking agents uye corticosteroids, nguva yekushandiswa kwe-neuromuscular inogadzirisa mhizha inofanira kunge isina kukwana sezvinogona.
Kana suxamethonium inoshandiswa muhuturo, hutungamiri hweRocuronium Bromide Powder hunofanira kunonoka kusvikira murwere apora muchipatara kubva neuromuscular block inokonzerwa ne suxamethonium.
Nzira yekutenga Rocuronium bromide powder kubva kuAASraw